Eshibhile Ishidi lensimbi izingxenye Welding ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Izinzuzo zensimbi zokushisela izingxenye zensimbi
- Gcina izinto zensimbi futhi unciphise isisindo sesakhiwo;
- Yenza lula inqubo yokucubungula nokufaka futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza;
- Amandla aphakeme okwakhiwa nokuvalwa okuhle ngokuhlangene; ukuhlinzeka ngokuguquguquka okukhulu kokwakhiwa kwesakhiwo;
- Inqubo Welding kulula ukuba imishini futhi imishini.
Ouzhan OEM ngezifiso ishidi insimbi Welding service-China Shanghai ishidi metal Welding izingxenye umkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Singacubungula izingxenye zokushisela zensimbi ezinemba kakhulu ezinekhwalithi ezinzile nethembekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wokushisela wensimbi. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yensimbi yokushisela insimbi inikeze ngokuqinile izindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singanikeza ngezinsizakalo zamanani entengo yokushisela insimbi nemikhiqizo ye-welding kumakhasimende ethu abalulekile.
Izindawo zokusebenzisa insimbi yensimbi
Izindlela ezahlukahlukene zokushisela zifanele izinto ezahlukene:
Ukushisela kwegesi: insimbi yekhabhoni ephansi, ithusi eliqinile le-alloy, njll.
Ukushisela i-electrode arc: insimbi engamelana nokushisa, ithusi elibomvu, ingxubevange eqinile, njll.
Ukucwiliswa kwe-arc ecwilisiwe:
I-Carbon dioxide gas welding welding: insimbi encane yokushisela
Ukushisela kwe-Argon arc: titanium alloy, Al alloy, njll.
Ukushisela i-Plasma: i-air duct, ibhokisi le-capacitor, njll.
Ukushisela kwe-Electroslag: imikhumbi yengcindezi enkulu ebiyelwe ngodonga, njll.
Indawo Welding: ukugqagqana kweshidi lokushaya izingxenye nemigoqo yokuwela, njll.
Ukushisela ngomthungo: izingxenye zensimbi ezincane
Ukuphrinta kwe-Projection: Welding emise okwe-T, ukuwela kwepayipi, njll.
Welding Butt: komzila, njll
Ukushisela insimbi: ama-rotor, imikhono, njll.
I-Brazing: insimbi enejubane eliphezulu, izingxenye zenjini, njll.
Yini ukusetshenziswa kwezingxenye zensimbi zensimbi
Inhloso enkulu yokushisela ukuxhuma izinto ezincane zensimbi zibe zinkulu (ngokusho kwemidwebo noma usayizi odingekayo), noma ukwenza i-geometry edingekayo ngokuxhuma (ukuwelda). Ukushisela, okwaziwa nangokuthi i-welding noma i-welding, kuyinqubo yokukhiqiza nobuchwepheshe bokujoyina izinsimbi noma ezinye izinto ze-thermoplastic ezifana namapulasitiki ngokushisa, ukushisa okuphezulu noma umfutho ophakeme.
Izinzuzo ze-Ouzhan sheet welding service
- Yonke insimbi eshisayo yensimbi ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza insimbi eqondile yokushisela insimbi.
Langaphambilini Izingxenye zensimbi yensimbi yangokwezifiso
Olandelayo: Ngokwezifiso ishidi lensimbi izingxenye